🥇 ▷ Aayadda Waddaniga ah ee PUBG waxay noqotay World & # 039; s Ciyaaraha Faa'iidada badan ee Mobillada ✅
Aayadda Waddaniga ah ee PUBG waxay noqotay World & # 039; s Ciyaaraha Faa’iidada badan ee Mobillada
Game For Peace ayaa dhigay rikoor kale oo ka dhex jira suuqa ciyaarta mobilada waxayna noqotay cinwaanka ugu lacagta badan adduunka sanadkaan. Kaliya 3 bilood jir, nooca wadaniyiinta ah ee PUBG waxay soo ururisay in kabadan $ 860 milyan bishii Luulyo oo keliya.
Ciyaartu waxay ahayd bedel kale oo ay soo saartay shirkadda Tecent, abuuraha nooca asalka ah ee PUBG, si ay ugu sii nagaato suuqa Aasiya qaab habaysan, iyadoo Shiinaha laga saaray suurtagalnimada ururinta dhaqaale ee ciyaarta mobilada ka dib markay ogaatay rabshadaha xad-dhaafka ah ee lagu dabaqay cinwaanka. .
Si kastaba ha noqotee, xitaa xayiraadaha dowladda ayaa ka dhigtay muwaadiniinta inaysan gacmahooda ku sii jirin – ama taleefanno ka sii fiican – oo ah ikhtiyaar madadaalo soo jiidasho leh. Tan iyo markii la siidaayay, “Game For Peace” wuxuu muujiyey mid aad u xiiso badan oo qaali ah, isagoo xukumay in seddex maalmood gudahood ay kicisay wax kabadan $ 14 milyan.
Guushaani waxay kaliya xaqiijineysaa waxa ku dhacay warshadaha ciyaaraha wareega, kaasoo horey u soo galay dakhli ka badan $ 2 bilyan wax ka yar labo sano, kuna darsaday macaashka laga sameeyay aaladaha Android iyo macruufka, halkaas oo Apple ay u taagan tahay inay awood u leedahay inay si habsami leh u socdaan Fortnite, Cinwaanka Ciyaaraha Epic.
Sida ku xusan warbixinta shabakada ‘Sensor Tower’, “Game For Peace” waxay soo aruurisay $ 860 milyan saddex bilood gudahood. Lambarkaani wuxuu suurtogeliyay in uu dhaafo cayaaraha caanka ah sida NetEase’s Knives Out ($ 771 milyan) iyo Fortnite, oo ka yimid cayaaraha Epic ($ 725 milyan).
Tirooyinku waxay ka sameeyeen Tecent kobaca faa iidada ugu badan bishii Luulyo, oo gaadhay 39% kordhsi ah oo ah iibsiyada ciyaaraha marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay, taas oo muujineysa sida ugu wanaagsan ee shirkaddu u siisay ciyaartoy magacyo tayo leh iyo soo jiidasho sare.